Pof Shrink Firimu, Pof Shrink Kuputira - GS PACK
Yakakura Sirivha Pack (Shenzhen) Co., Ltd.
Yakakura Sirivha Pack (Shenzhen) Co., Ltd. hofisi yemusoro muHongkong, yakavambwa mu1993, iri padivi peyekunaka Shiyan Lake Zororo. Resort muGuangMing Nyowani Dunhu, Shenzhen, China. Maminetsi makumi maviri rwendo kuenda kuShenzhen International Airport. Isu tiri vamwe vevakuru vezvigadzirwa zvehunyanzvi vanogadzira polyolefin shrink firimu muChina. Uye wekutanga muhombe mugadziri kumaodzanyemba kweChina ane makore anopfuura 19 ane ruzivo mukugadzira yekudzora zvakaputira zvinhu.
Kutendeseka, kuvhurika uye kuenderana, kukura kunowirirana, uye kugadzira mamiriro ekuhwina-kuhwina; Rarama nehunhu, kukura nemukurumbira, uye kubatsirwa nevatungamiriri; Kugara kutora chikamu, simbisa manejimendi, shingairira kukwana, kukanda mhando ...
Kutenda, kwakanaka, kwakanangana, kushingaira, uye kushandira pamwe; Fraternity, kuwirirana, hunyanzvi, kutaurirana, uye kuhwina-kuhwina; Forge kumberi, kuhwina, kurwa, kutaurirana, kupaza nepakati, kuzadzisa
Kuziva zvemhando yepamusoro kuri mumoyo mangu, chigadzirwa mhando chiri mumaoko angu; Kuchenjerera, kuchenjera, uye kuteerera, kuitira kuti vatengi vagogona kuzorodzwa nesu; Gadzira nemoyo, shandisa nekuvimba, uye urarame uchifara
182020 / Zvita
1. Tsanangudzo dzakasiyana: Pe firimu chinhu chine kuomarara kwakanaka kwazvo, uye hazvisi nyore kupwanya neakajairika epurasitiki crusher. Nekuti iyo PE firimu iri yakapfava uye yakaoma, hazvisi nyore kubvarura, tisingataure tembiricha yakakwira yechishandiso pakumhanya, izvo zvinoita kuti LDPE inyungudike uye kushambadzira ...
082020 / Zvita
Dzora firimu kupatsanura
Shrink firimu inoshandiswa mukutengesa uye kutakura maitiro ezvigadzirwa zvakasiyana. Basa rayo guru nderekudzikamisa, kuvhara uye kuchengetedza chigadzirwa. Iyo yekuderera firimu inofanirwa kuve neakakwira puncture kuramba, yakanaka shrinkage uye imwe shrinkage kushushikana. Munguva yekudzikira maitiro, iyo firimu haigone kugadzira ...
042020 / Zvita
Usandibvunze kuti chii chinonzi POF kupisa chinodzikira ...
POF yekupisa-inodzikira firimu inosangana nekushandiswa kweinovhurwa yekumhara midziyo ine akasiyana maumbirwo. Iyi isina-chepfu, isina kunhuwirira, isina mafuta, uye inoenderana nehutsanana hwechikafu inobvumira vagadziri kushandisa mavara anobata maziso kuti vawane dhizaini ye360 °. Ipa kutamba kuzere kune kugona uye kufunga, kuitira kuti ...
Pane chero musiyano pakati pePOF naiye ...
Pane chero musiyano pakati POF uye kupisa inodzikira firimu? POF zvinoreva kupisa inodzikira firimu. Iro izere zita rePOF rinonzi multi-layer co-extruded polyolefin kupisa shrinkable film. Iyo inoshandisa yakatetepa yakaderera-density polyethylene sepakati yepakati (LLDPE) uye co-polypropylene (PP) seyemukati nekubuda ...
Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Shrink Firimu Pvc, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Polyolefin Pof Shrink Kuputira,